I-McDonalds sele ivavanye ii-odolo kunye neentlawulo ngokusetyenziswa kwayo | Iindaba zeGajethi
UMcDonalds sele evavanya ii-odolo kunye neentlawulo ngokusetyenziswa kwazo
Umhlaba wezicelo phantse awunamda. Zimbalwa iinkampani okanye iinkonzo ezisweleyo isicelo esiselfowuni namhlanje, kwaye iinkampani ziye zaqonda ukuba kulula ngakumbi ukwenza imisebenzi yesiqhelo yokuthenga nokuthengisa ngesicelo, kokukhona imali iphelela ekufumaneni. Nangona kunjalo, zimbalwa izicelo ezisetyenziselwa nantoni na engaphaya kokusebenzisa izibonelelo, njengoko kunjalo kwizicelo zikaBurger King okanye zikaMcDonald ezisivumela kuphela ukuba sibone imenyu kwaye zisinike izaphulelo. Kwelinye icala sinesicelo seTelepizza, esivumela ukuba sibeke iiodolo ekhaya nasekuqokeleleni. Yile nto uMcDonald ayifunayo, ukuba Sele ivavanya iodolo yokuhlawula kunye neqonga lokuhlawula kusetyenziswa iapp yayo.
Ukuba i-franchise yokutya okukhawulezileyo eMntla Melika ihamba ngexesha elibi yimfihlo evulekileyo, kodwa ngokwe I-Business Insider, inkampani iceba ukunika ukujija kwindlela esi-odola ngayo "zokutyela" zayo. Inyani yile yokuba babephakathi kwabokuqala ukufaka iipaneli apho unokubeka khona iodolo yakho ngaphandle kokuma emgceni kwaye uhlawule ngekhadi, eSpain sele beneminyaka engaphezu kwemibini besebenza. Nangona kunjalo lixesha lokuba uhambe inyathelo eliya phambili ukuze ungashiywa ngasemva kukhuphiswano.
Inkampani eyaduma ngokuhambisa iihambhega ivavanya obu buchwephetsha kwiindawo ezithile eMelika, nangona kunjalo, kulindeleke ukuba inwenwele iye e-Australia, Canada, France nase-United Kingdom ngalenyanga ka-Novemba. Ngo-2018 bazimisele ukuba ngaphezulu kwevenkile ezingama-25.000 ezihambelana nale nkqubo intsha kunye nenkqubo yokuhlawula, kwaye besingayi kumangaliswa ukuba uninzi lwazo lufunyenwe kwezona ndawo zidumileyo eSpain.
Ukusukela ngo-2015 uMcDonald's ebesebenza kule teknoloji, njenge-CEO yayo, uSteve Easterbrok, ekwaziswe ngayo kulo nyaka uphelileyo, kwaye engqina iimvavanyo ezifanayo kwindawo yaseYurophu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » UMcDonalds sele evavanya ii-odolo kunye neentlawulo ngokusetyenziswa kwazo
Uvavanyo lokumelana neXperia XZ lusothuse ngeplastiki eninzi
U-Luca Tedesco ukwabonisa ukuba i-iOS 10.1.1 isemngciphekweni wokuqhekeka kwejele